Fanasokajiana ny fampisehoana LED mitaingina fiara
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny fampisehoana LED dia miseho ny fampisehoana LED mitaingina fiara. Raha ampitahaina amin'ny fisehoana mahazatra, raikitra ary tsy afaka mihetsika LED, dia manana fitakiana avo lenta amin'ny fitoniana, fanoherana, fanakorontanana, lafiny hafa izy io. Ny fomba fanasokajiana azy dia hafa ihany koa arakaraka ny tsy itovizany ...
Fikolokoloana matihanina amin'ny fomba fanamoriana LED tsara
Amin'ny alàlan'ny fampisehoana LED ny vokatra elektronika, ny tranofiara LED amin'ny fiara finday ivelany rehefa ampiasaina amin'ny tontolo iainana, ny fotoana fandehanana sns sns dia samy manana olana sarotra avokoa, noho izany ny fampiasana dia tsy mila mijery fotsiny ny fampiasana ny fahaiza-manao, fa mila matetika koa amin'ny fikojakojana ny tranofiara LED, afaka ...
2021 JCT fampiratiana fiara fitateram-bahoaka LED azo namboarina
Mihamaro ny orinasa nampiditra “serivisy ho an'ny tetik'asa fiveloman'ny olona” amin'ny asany lehibe, toy ny orin'asa angovo sy angovo, zavamaniry ary orinasa hafa mifandraika amin'ny sakafo, fitafiana, trano ary fitaterana. JCT LED serv ...
Manapa-kevitra ny hividy fiara dokambarotra LED aorian'ny fahazoana ny orinasa Jingchuan (JCT)
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fiaraha-monina dia niha-nitombo ny haino aman-jery, nanomboka tamin'ny gazety nentim-paharazana, nohatsaraina tsikelikely ho takelaka, finday, solosaina…. Ny dokambarotra an-kalamanjana dia niditra tamin'ny lafiny rehetra tamin'ny fiainantsika. Ny olona dia lasa tamin'ny fanekena mavitrika ho lasa kely ...
Ny fiara fanaovana dokam-barotra LED dia fitambarana tonga lafatra amin'ny fiara finday sy ny efijery LED
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, mihamaro hatrany ny orinasa an-trano sy avy any ivelany ary ny haino aman-jery ivelany mampiasa fiara fitaterana LED. Izy ireo dia mifandray amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampielezam-peo mivantana, ny fizotran'ny hetsika ary ny fomba hafa, mba hahafantaran'ny tsirairay tsara ny marika sy ny vokariny ary hanatsara ny mpanjifa ...
Mobile LED trailer - fitaovana vaovao ho an'ny dokambarotra ivelany
Ho avy tsy ho ela ny Krismasy fanao isan-taona, ary ireo toeram-pivarotana lehibe koa dia manomboka manao dokambarotra am-pahavitrihana sy miomana amin'ny fetin'ny varotra, amin'ity indray mitoraka ity dia afaka misafidy ny tranofiara LED Mobile ianao ho toy ny fitaovana fampiroboroboana haino aman-jery ivelany vokatrao. Jingchuan Mobile LED tranofiara dia ahitana chass azo zahana ...
Fironana haino aman-jery dokambarotra ivelany vaovao - tombony amin'ny fifandraisana amin'ny fiara LED
Jingchuan LED fiara fitateram-bahoaka, dia efijery lehibe misy fivoahana LED finday, fisehoana loko lehibe HD an-kalamanjana HD mitaingina eo amin'ny vatan'ny chassis tranofiara finday misy dokambarotra ivelany, ampiasaina amin'ny fampiroboroboana sy fampiroboroboana dokam-barotra any ivelany, vokatra miavaka. etsy ambany dia hanana ...
Ahoana no hanoherana ny hatsiaka ny kamiao amin'ny ririnina?
Ahoana no hanoheran'ny kamio ny hatsiaka raha mangatsiaka be amin'ny ririnina? Amin'ny ririnina mangatsiaka, ahoana no fomba hanoherana ny hatsiaka ny kamio? Ahoana raha mangatsiaka loatra mandritra ny fampisehoana ary tsy afaka mandeha ny fananganana hydraulic? Sa ahoana raha tsy afaka manomboka ny kamio an-tsehatra? Fampisehoana mangatsiaka fanoherana ny kamio an-tsehatra ...
Safidy fanaraha-maso ny kamiao ambaratonga écran
Misy karazany roa ny fifehezana ny kamiao amin'ny écran, ny iray manual ary ny iray remote control. Mandritra izany fotoana izany dia manana fomba fiasa isan-karazany toy ny fandidiana tanana, fiasan-davitra, fiasan-bokotra sns. Ka ny kamiaon-tsarimihetsika aiza no tsara kokoa? Iza amin'ireo fomba fiasa no tsara kokoa? Avy amin'ny ...
Fantaro ny fanasokajiana ny kamiaon-tsarimihetsika Billboard alohan'ny fividianana
Ny kamiao Billboard dia miseho matetika hatrany eo amin'ny fiainantsika. Izy io dia kamio manokana ho an'ny fampisehoana finday ary azovolavolaina ho dingana iray. Betsaka ny olona tsy mahalala izay fanaingoana tokony hividianana azy ireo, ary amin'io lafiny io, ny tonian-dahatsoratry ny JCT dia nitanisa ny fanasokajiana ny kamiaobe. 1. Cl ...
Fampidirana ireo fiasa amin'ny kamio amin'ny finday
Eo amin'ny sehatry ny dokambarotra an-kalamanjana dia misy kamio mivezivezy. Mihetsika malalaka miaraka amin'ilay kamio boaty ny lampihazo ao anatiny, noho izany tsy vitan'ny hoe mampitombo ny vokatry ny dokam-barotra izy io, fa mahatonga ny "dingana mihetsika" ho tanteraka. Izy io koa dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fampiroboroboana, izay azo ampiharina sy mora. JCT ...
Mamoaka dingana mihetsika ny kamio mihetsika
Eo amin'ny arabe mitabataba dia tsy maintsy nahita fiara van izay afaka mamelatra dingana ianao. Ity fitaovana mandroso ity dia manome mora ny orinasa sasany hitarika hetsika sy dokambarotra ary miharihary ny vokany. Ity karazana fitaovana vaovao ity dia kamio mihetsika. Ny toerana rehetra misy ny st ...
Fanasokajiana ny LED mitaingina fiara ...
Fikolokoloana matihanina amin'ny LED tsara ...
Fampisehoana tarihin'ny varavarankely ambadika, Led Mobile kamio, Orinasa fanaovana dokambarotra kamio, Nentina amidy kamiao finday, Doka Advertising Billboard, Tariby tarika ho an'ny fiara,